Censorship.no!/User Manual (intro/ceno) @ Hosted Weblate
0% 18 487 3,566 1800 0
33% 12 279 2,157 1000 0
11% 16 480 3,534 1500 0
88%24 792120
16% 15 479 3,431 1400 0
11% 16 479 3,489 1330 0
5% 17 485 3,534 15 100
11% 16 483 3,494 1600 0
ivilata authored9days ago
432 11,688 85,584
18 487 3,566
21% 91 20% 2,439 20% 17,844
7% 31 6% 716 6% 5,230
32% 140 31% 3,642 31% 26,640
2%91% 66 1% 550
4% 18 4% 487 4% 3,566
1% 8 1% 18 1% 386
1%21%41% 79
65% 283 68% 7,980 68% 58,394
0 changes 33 changes0changes 63 changes0changes 247 changes0changes 91 changes0changes 20 changes0changes 36 changes0changes0changes0changes7changes0changes 72 changes0changes 186 changes 52 changes 68 changes 11 changes 76 changes
Censorship.no! / User Manual (intro/ceno)
Censorship.no! / User Manual (intro/ceno) — Burmese
CENO (short for [Censorship.no!][Censorship.no!]) isaWeb browser for mobile Android devices (such as smartphones and tablets) that usesanovel approach to circumvent Internet censorship and share retrieved content among all users ina[peer-to-peer][P2P] (P2P) fashion. This reduces overall reliance on international network exchanges, and allows frequently requested Web content to persist in the network even during heavy filtering and throttling events.
Burmese 1 character edited Current translation Approved
CENO ( [Censorship.no!][Censorship.no!] ၏ အတိုကောက် အခေါ်အဝေါ် ) ဆိုသည်မှာ (စမတ်ဖုန်း နှင့် တက်ဘလက် တို့ကဲ့သို့) မိုဘိုင်း Android နည်းပညာသုံး စက်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြု နိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ဆို့မှုကို ကျော်လွှားရန်နှင့် ဆင်ဆာဖြတ်ထားသည့် အကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုသူများအကြား အချင်းချင်းဖြန့်ဝေနိုင်ရန်အတွက် ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်း [အသုံးပြုသူထံမှ အသုံးပြုသူ][P2P] (P2P) ဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။ ဤဘရောက်ဇာက နိုင်ငံတကာ နက်ဝေါ့ခ်များ အပေါ် မှီခိုအသုံးပြုရခြင်းကို လျော့ချပေးပြီးပိတ်ဆို့မှုများရှိနေသည့်တိုင် လူကြည့်များသည့် အကြောင်းအရာများကို နက်ဝေါ့ခ်အတွင်း ကြာရှည်စွာ တည်ရှိနေစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Censorship.no! / User Manual (intro/ceno) — Korean
[안드로이드용 파이어폭스]: https://www.mozilla.org/firefox/android/